An Asian Tour Operator: Tribute to Mr. Robin
လက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးပြီးလျှင် ၀လုံးလေးကိုဝိုင်းအောင်ရေးတတ်အောင်သင်ပေးသည့် လည်ပေါ်ကျောင်းက ဆရာမဒေါ်ခင်ရီ နှင့် ဆရာမဒေါ်ခင်စီ အပြင် အခုအသက်အရွယ်အထိ သင်ဆရာမြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ အားလုံးတို့ကို သတိရလျှင်ရသလို ဦးခိုက်ဂါရ၀ပြုရပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ အမှတ်ထင်ထင် စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲ အမြဲစွဲကျန်နေတဲ့ ဆရာများစွာရှိတဲ့ အထဲမှာ ဆရာဦးသန်းလွင် (a.k.a) Mr. Robin Guy တစ်ယောက်လဲ အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပါတ်သက်မှု့ ကတော့ ၂/၂၀၀၁ ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်း နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခံ့ခွဲမှု ပထမဆုံးအပါတ်စဉ်များမှာ ဆရာက ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းသင်သည့်ဆရာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်က သင်တန်းသားသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းသဘောအရ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံက ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အထူးပြုကျွမ်းကျင်သူ ဆရာ၊ဆရာမတွေ၊ အစိုးရဌာနအကြီးအကဲတွေ လာရောက်သင်ကြားသည့် အဆိုပါသင်တန်းများမှာ ဆရာဦးသန်းလွင်ကို သတိထားမိသည့် အချက်များစွာထဲမှာ သူ့ရဲ့ ပွယောင်းယောင်းတိုက်ပုံ နဲ့ ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ အပြုံး တို့ဟာအထူးခြားဆုံးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
"ဟိုတယ်ဆိုတာ လူတွေတည်းလို့ရတယ်၊ အစားအသောက်စားလို့ ရတယ်" လောက်သာ ဟိုတယ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို သင်တန်းသားတွေကို ဟိုတယ်အကြောင်း၊ ၀န်ဆောင်မှု့အကြောင်း၊ ဟိုတယ်တစ်လုံးလည်ပတ်အောင် အချိတ်ဆက်မိမိ လုပ်ဆောင်ကြရတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ဌာနတွေအကြောင်းကို အသေးစိတ် စိတ်ရှည်လက်ရှည်သင်ပြပေးပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာသုံးတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ် ကိုစာရွက်တွေ တစ်ထပ်ကြီးမိတ္တူကူြး့ပီး ဝေပါတယ်။ ဆရာပေးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးကို တခြားဆရာတွေပေးတဲ့စာရွက်စာတမ်းနည်းတူ အမြတ်တနိုးသိမ်းထားခဲ့ပေမယ့် ဘ၀ရဲ့ အလှည့်အပြောင်းတွေကြောင့် တခြားအဖိုးတန်စာအုပ်စာတမ်းများ လို ပျောက်ရှ ပျက်စီးခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဆရာ့ သင်ကြားမှု့ ကပေးတဲ့ ဗဟုသုတ တစိတ်တဒေသကတော့ ယနေ့အချိန်အထိ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ အသုံးကျပြီး အသုံးကျနေဆဲပါ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်နေရသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာ က နိုင်ငံရပ်ခြားမှာအထိ ရင်ကော့ပြီးယုံကြည်မှု့အပြည့်နဲ့ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တာ ဆရာ့ကျေးဇူးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရက်အနည်းငယ်နောက်ကျပြီးမှ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သြဂုတ်လ ၈ရက်နေ့ထုတ်ကြေးမုံသတင်းစာမှာ ဆရာ့ရဲ့နာရေးကြော်ငြာဖတ်လိုက်ရပါပြီ။ ခရစ်တော်၌ အိပ်ပျော်ခြင်း..တဲ့။ ဆရာက စိတ်ကောင်းရှိပြီး စေတနာထားတော့ ဆရာတို့ဘာသာအရဆိုရင် ကောင်းကင်ဘုံမှာ သရဖူဆောင်းရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဆရာကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ..။
Posted by An Asian Tour Operator at 8/13/2018 11:28:00 AM
I really like your take on the issue. I now haveaclear idea on what this matter is all about.. Inca Trail Tour Operator
10:05 PM, June 08, 2019
6:10 AM, January 12, 2021
1:30 PM, January 12, 2021
nice article. free backlink. visit tonice article. free backlink. visit to
traditional covid antidote
12:51 AM, January 22, 2021
Blog Archive November 2021 (1) August 2018 (1) February 2018 (1) June 2016 (1) September 2014 (1) September 2013 (1) February 2013 (1) December 2012 (1) September 2012 (1) August 2012 (1) June 2012 (1) May 2012 (1) March 2012 (1) January 2012 (2) December 2011 (1) October 2011 (1) September 2011 (2) August 2011 (2) July 2011 (2) June 2011 (1) May 2011 (3) March 2011 (3) February 2011 (5) January 2011 (1) December 2010 (2) November 2010 (1) October 2010 (1) September 2010 (1) August 2010 (2) July 2010 (2) June 2010 (4) May 2010 (3) April 2010 (2) March 2010 (2) February 2010 (2) January 2010 (2) December 2009 (2) November 2009 (2) October 2009 (3) September 2009 (2) August 2009 (1) July 2009 (4) June 2009 (10)